Qiimaha daawooyinka cambaarta oo cirka isku shareeray - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Qiimaha daawooyinka cambaarta oo cirka isku shareeray
La daabacay måndag 19 augusti 2013 kl 12.12
Waxaa jira dad qaba cambaar ba’an oo ay ugu baahan yihiin daaweyn, laakiin waxaa hadda cirka isku shareeray qiimaha daawooyinkaas oo ay ka mid tahay Roaccutan oo aan hadda wixii loo isticmaali karin kaarka xadka ugu sarreeya ee qiimaha daawooyinka.
Gabar 19 sano jir ah oo lagu magacaabo Maria Richter ayaa daawadaan soo isticmaaleysey ilaa dayrtii sannadkii hore, laakiin haddii ay maanta bilaabi lahayd waxaa ku adkaan lahaa in ay awooddo qiimaha daawadaan.
- Waxaan sii deystey tina ad u dheer si aan ugu qariyo cambaarta wejiga iga soo baxday, waayo waxaa iga soo baxday cambaar aad u xun.
Waxaa baaritaan lagu sameynayaa tartanka ka dhexeeya daawooyinkii hore iyo kuwa cusub. Marka ay hadda suuqa soo galaan daawooyin cusub, waxaa inta baaritaanku meesha ka baxaya xeerkii xadeynayey qiimaha ugu sarreeya oo qofka bukaanka ahi bixinayo. Daawada roaccutan oo lagu dagaalamo cambaarta ma noqon doonto mid la kabo inta baaritaanku socdo.
Qofka doonaya inuu isagu bixiyo kharashka daawadaas oo dhakhtar u qoray, wuxuu qiimuhu noqonayaa gebi ahaan 5000 oo karoon ilaa 18000 oo karoon, taas oo ku xiran hadba inta markiiba la qaadanayo iyo waqtiga daaweyntu socoto.
Dhakhtar maqaarka oo lagu magacaabo Gunnar Nyman kana hawlgala isbitaal ku yaal magaalada Borås ayaa daleeceyn ku soo jeediyey in daawooyinka noocaan ah laga reebo.
- Sida xeerka cusub ku qoran, dadka hadda qaata daawada roaccutan mas ii wadi doonaan oo waxaa boosteeda loogu beddeli doonaa daawo cusub oo lagu magacaabo isotretionin. Welina lama hubo in daawadaan cusubi ay ka mid noqon doonto daawooyinka qiimahooda la kabo. Waxaana laga yaaba in aanaan jawaab helin inta ka horreysa dayrta soo socota, ayuu Gunnar Nyman.
Maxay taasi micne u sameyneysaa dadka bukaanka ah?
- Taasi waxay la micne tahay in aan dadka ku daaweynno daawo tii hore ka waxtar yar marka laga hadlayo dadka qaba cambaarta daran. Waxaan sii deystey tina ad u dheer si aan ugu qariyo cambaarta wejiga iga soo baxday, waayo waxaa iga soo baxday cambaar aad u xun.
Maxay maskax ahaan taasi ku reebi kartaa dareenka dadka bukaanka ah?
- Waxay dadkaas u keeni kartaa culeys ballaaran oo xagga maskaxda ah iyo in tayada hab-nololeedkoodu aad u xumaado. Dad badan ayaa aad ula liita cudurkaan cambaarta oo ay ku kalliftaa in ay gooyaan xiriir dadka.